Sunday April 12, 2015 - 19:36:01 in Wararka by Super Admin
Waxay soo bandhigtay 11 magac oo ay sheegtay in ay doon doonayeyso islamarkaana ay mid walba ku bixinayso lacago boqolaal kun oo dollarka Mareykanka ah.
Dowladdu Ma Awoodaa in ay Culimo Lacag Dul Dhigto?
Dad badan oo la socda xaaladda dowladda ayaa aad ula yaabay markiiba uu warkan soo baxay iyagoo is weydiiyay halka uu nidaamka Gurguurte lacagahan ka keeni karo.
In dowladdu dad mujaahidiin ah oo madaxoodu qaali yahay lacag dul dhigto iska dhaafe, waxaaney awoodi karin in ay mushaar siiso ciidamadeeda amaba ay daawo u hesho kolka ay dhaawacmaan.
Askarta dowladda waxaa u yaalla isbaarooyin ay dadka ku baadaan.
Beesha caalamku waxay sannad walbaahi madaxda dowladda ku eedeysaa iney lacago musuqmaasuqeen.
Ma jirto maalin aaney madaxda iyo wasiiradu gacmaha u hoorsan dowladaha shisheeye iyagoo waliba ku faana in wax loo ballaan qaaday ama wax lasoo siiyay.
Intaa waxa dheer calaacalka joogtada ah ee kasoo baxa madaxda dowladda kuna saabsan in aaney beesha caalamka siin dhaqaalihii loo ballan qaaday.
Halkan Ka Dhageyso Madaxweyne Gurguurte oo calaacalaya.
Haddii Ay DF Xog Ka Hesho Mas’uuliyiin Ma Awooda Iney Beegsato?
Dowladdu ma lahan dayuurado ay wax ku beegsato, waa dowlad xitaa shisheeyuhu u diideen iney miinooyin soo iibsato, sidaa darteed haddii warkeeda loo raaco waa in ay jaasuus u noqoto Mareykanka oo ay war bixinno siinayso.
Marka laga hadlayo dowladaha daba dhilifyada caalamka ee ka hoos shaqeeya gumeystaha, waxaa ugu liita tan Xassan Sheekh. Waxaad arkeysaa in iyagoon ka war qabin uu Mareykanku duqeymo ka geysto dalka kaasoo marka uu sheeganayo aanan xitaa dowladda u quurin iney dhanka jaasuusnimada ka caawisay.
Waxa intaa sii dheer oo fadeexadooda kamid ah in Marka Mareykanku hadlo kadib ay shiraan islamarkaana ay iyaga uun is magacaabaan iyagoo sheegaya iney soo dhaweynayaan wixii Mareykanku geystay kaalinna ka qaateen!!
Sidoo kale waxaa jira in Markii Mareykanka ama shisheeyaha kale lagu wax yeeleeyo wadanka ay bah dil weyn la kulmaan.
Tusaale weerarkii Xalane waxay shisheeyuhu eedeeyeen dowladda iyo sirdoonkeeda iyagoo intaasi ku daray iney baraayayaan sidii ay wax u dheceen. Xitaa waa loo quuri waayay waxaan kala kaashaneynaa dowladda. Kaalinta dowladda ayaa waxay kusoo uruurtay tacsi tiiraanyo leh!!.
Maxay DF Uga Dan Lahayd Hadalka Lacag Dul Dhigidda Ah?
Warka xukuumadda ee Khamiistii wuxuu kusoo aaday todobo maalmood kadib markii ay mujaahidiinta weerar ku qaadeen jaamacadda Gaarisa dhulka Soomaalida ee la heysto.
Warbaahinta oo dhan waxaa qabsaday wararka dhacdada iyo Kenya iyo mujaahidiinta Soomaaliya oo hadalo is dhaafsanaya, taas waxay keentay in dowladdu lunto oo ay kaalin ku lahaan weyso iclaamka caalamiga ah, waana midda ku khasabtay iney tiraahdo waxaan lacag dul dhignay mujaahidiin si uun loo arko warkeeda.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo Markii ay Mareykanku lacago dul dhigaan hadli jiray ayaanan wax jawaab ah ka bixin hadalka dowladda, taasoo loo fasiran karo in warka dowladda Xasan Sheekh uu mujaahidiinta aggtooda ka yahay mid calwasaad ah oo aanan meel kasoo qaad lahayn.